On sept 27, 2018 26 120
Raha mpampindram- bola ny orinasa madinika no nataon’ny SIPEM nanomboka nijoroany ny taona 1994. Ankehitriny, efa lasa Banky toy ny efa misy eto Madagasikara izy. Teny amin’ny Citizen Isoraka ny Alarobia lasa teo no nampafantatra izany ny tomponandraikitra eo anivon’ity Banky ity.
Miavaka noho ny hafa ny » Sipem bankitsika » ,hoy ny tale aram- barotra Rakotoarisoa Andriniaina,noho izy Malagasy avokoa ny ankamaroan’ny mpitantana rehetra. Afaka mampiasa ny tolotra hita amin’ny banky rehetra taorinan’ny fahazaon- dalana ny Desambra 2014, azo ataon’ny mpanjifa ao aminy manomboka ny mametram- bola sy maka izany amin’ny alalan’ny karatra na ny seky.
Mahatratra 35 000 ny mpanjifa, 7000 no efa nahazo fahafaham-po tamin’ny findramam- bola. Tsy ny fampindramam- bola ihany no ataon’ny Sipem banky fa eo ny fanoron- kevitra amin’ny fomba fitantanana ataony amin’ny mpindrana .
New York: Réunion sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles